ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များမသိဘဲ ပြုလုပ်မိတတ်တဲ့ Plagiarism အကြောင်း – Internet Journal |
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များမသိဘဲ ပြုလုပ်မိတတ်တဲ့ Plagiarism အကြောင်း
Mar 13, 2018Comments Off on ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များမသိဘဲ ပြုလုပ်မိတတ်တဲ့ Plagiarism အကြောင်း0284
ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပါ စာပိုဒ်တွေ၊ ဆရာ/ဆရာမတွေ ရေးသားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ မေးခွန်း၊ အဖြေတွေနဲ့ စာစီစာကုံးတွေကို နားလည်သည်ဖြစ်စေ၊ နားမလည်သည်ဖြစ်စေ တစ်လုံးမကျန် အလွတ်ကျက်မှတ်ဖြေဆိုတဲ့ ပညာရေးစနစ်နဲ့ အသားကျလာခဲ့သူ မြန်မာလူငယ်တွေ အနေနဲ့ Plagiarism (သူများရဲ့ အကြံဉာဏ် သို့မဟုတ် အရေးအသားများကို ကူးယူပြီး မိမိရဲ့ အကြံဉာဏ် အရေးအသားကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်း) အကြောင်းကို သိရှိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမေရိကန် အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ ပညာရေးနယ်ပယ်မှာ Plagiarism ကိုကျောင်းရဲ့ မူဝါဒ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ပေါ်လစီ (Policy) ထဲ ထည့်သွင်းရေးသားထားတဲ့အထိ အလေးအနက်ထားကြလို့ပါပဲ။
ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေအတွက် Plagiarism ကို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေ၊ အခြားစာအုပ်စာစောင်တွေနဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေထဲက စာသားတွေ၊ ရုပ်ပုံတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ စိတ်ကူး အကြံဥာဏ်တွေကို တိုက်ရိုက်ကူးယူပြီး ကိုယ်တိုင် ရေးသားဖန်တီးထားပုံမျိုးနဲ့ ဟန်ဆောင်လိမ်လည်တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Merriam-Webster အဘိဓာန်မှာတော့ Plagiarism ကို “Using the words or ideas of another person as if they were your own words or ideas. Stealing and
passing off the ideas or words of another as one’s own without crediting the source.” လို့ ဆိုထားပါတယ်။ အခြားသူရဲ့ စကားလုံး ဒါမှမဟုတ် စိတ်ကူး အကြံဉာဏ်တွေကို မိမိကိုယ်ပိုင် စကားလုံး ဒါမှမဟုတ် စိတ်ကူး အကြံဉာဏ်တွေအဖြစ် အသုံးပြုတာ၊ ပင်မရင်းမြစ်တွေကို ရည်ညွှန်းကိုးကားဖော်ပြခြင်း မရှိဘဲ အခြားသူရဲ့ စိတ်ကူး အကြံဉာဏ်တွေ ဒါမှမဟုတ် စကားလုံးတွေကို ခိုးယူပြီး မိမိကိုယ်ပိုင်အဖြစ် တင်ပြတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ တော်တော်များများမှာ ကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအတွက် မူပိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိသလို ဦးနှောက်ဉာဏ်ကို အသုံးပြုပြီး ရေးသားပြုစု ဖန်တီးထားတဲ့ အရာတွေအတွက်လည်း ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် ဆိုတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ပါးသူရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ ရရှိလာတဲ့ ဘယ်အရာကိုမဆို ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုလို ဟန်ဆောင် လိမ်ညာပြီး လက်လွတ်စပယ်သုံးစွဲလို့ မရပါဘူး။ အဲဒီလိုလုပ်ခဲ့ရင်လည်း လိမ်လည်မှု (fraud)၊ ခိုးယူမှု (theft) မြောက်ပါတယ်။
ပညာရေး နယ်ပယ်မှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်နဲ့ ရေးသားဖန်တီး တင်ပြကြဖို့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက တာဝန်ပေးချိန်မှာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေက ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်အပါအဝင် စာအုပ်စာတမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေပေါ်ကနေ ရှာဖွေကူးယူပြီး ဖြတ်ညှပ်ကပ်ပုံစံနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အသွင် ဖန်တီးရေးသား တင်ပြမယ်ဆိုရင် Plagiarism မြောက်ပါတယ်။ ဒါကို ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းက ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မသမာမှု၊ ပြင်းထန်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ချိုးဖောက်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အရေးယူတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ပြန်လည် ရေးသားတင်ပြခိုင်းတာကစလို့ တကယ့်ကို ကြီးလေးတဲ့ (Plagiarism) အတွက် ကျောင်းကနေ ထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့အထိ အရေးယူတတ် ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်နဲ့ တူအောင် ရေးသားဖြေဆိုနိုင်လေ၊ အမှတ်များလေဆိုတဲ့ ပညာရေးစနစ်နဲ့ ယဉ်ပါးခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူ
လေ၊ စာမေးပွဲကျနိုင်ခြေများလေဖြစ်တဲ့ “Plagiarism policy” ကို နားလည်သိရှိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆိုရင် တစ်ပါးသူရဲ့ အရေးအသားနဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို လုံးဝယူရေးလို့ မရဘူးလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတာလေးတွေကို လိုက်နာမယ်ဆိုရင် လိုအပ်တဲ့နေရာတချို့မှာ တရားဝင်ယူ သုံးလို့ ရပါတယ်။ ကိုယ်ယူသုံးချင်တဲ့ အချက်အလက်စာသား အချို့ကို မျက်ဆံအဖွင့် အပိတ်လို့ခေါ်ကြတဲ့ quotation marks အမှတ်အသား (“—“) ထဲမှာ ထည့်ပေးရပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ အဲဒါတွေကို ရယူထားတဲ့ ရင်းမြစ် (source) ကို ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးရပါမယ်။ ရင်းမြစ်ဆိုရာမှာလည်း လူပုဂ္ဂိုလ်၊ စာအုပ် စာတမ်း၊ ဆောင်းပါးစတာတွေအပါအဝင် ကိုယ်ထုတ်ယူ အသုံးပြုတဲ့ မူလဇစ်မြစ်နေရာတွေ အကုန်လုံး အကျုံးဝင်ပါတယ်။
Plagiarism ကို ရှောင်လွှဲနိုင်စေမယ့် နောက်ထပ် နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ မိမိဖတ်ရှုလေ့လာထားတဲ့ အကြောင်းအရာကို မိမိနားလည်တဲ့အတိုင်း ကိုယ်ပိုင်ဟန်၊ ကိုယ်ပိုင်စာလုံးတွေနဲ့ ပြန်လည် ရှင်းလင်းရေးသားကာ paraphrase လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အတွက် အကြောင်းအရာကို သေချာနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပြီး တစ်ခေါက်ဖတ်ရုံနဲ့ မလုံလောက်ရင် ထပ်တလဲလဲ ပြန်ဖတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဟန်၊ ကိုယ်ပိုင်စာလုံး၊ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးတို့နဲ့ ပြန်လည် ရေးသားပြင်ဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကြည့်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်
အကြောင်းကို သူငယ်ချင်း ဒါမှမဟုတ် မိသားစုဝင်တွေကို ပြန်လည် သုံးသပ်ပြောဆိုပြခြင်းမျိုးနဲ့ “paraphrase”လုပ်တာကို လေ့ကျင့်ပျိုးထောင် ယူနိုင်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းပေမဲ့ Plagiarism ကို ရှောင်လွှဲနိုင်စေမဲ့ နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ အကြောင်းအရာနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဥပမာလေး တွေပေးပြီး ပြင်ဆင်ရေးသားဖို့ ပါပဲ။ အဲဒီလိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဆရာ၊ ဆရာမတွေအနေနဲ့ အကြောင်းအရာအပေါ် ကျောင်း သူ၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့ နားလည်နိုင်စွမ်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အကဲဖြတ်သုံးသပ်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို တစ်ဖက်မှာလည်း ကာယကံရှင် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဆက်စပ်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေ တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အချုပ်အနေနဲ့ အလွတ်ကျက်မှတ် ဖြေဆိုစနစ်နဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ မြန်မာကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ပညာရေး အသိုင်းအဝိုင်းထဲ ဝင်ရောက်ကြရာမှာ Plagiarism policy နဲ့ ငြိစွန်းမှုမရှိစေဖို့အတွက် အပေါ်က အချက်လေးတွေကို သတိပြုလိုက်နာပြီး ကိုယ်ပိုင် စဉ်းစားတွေးခေါ် ဖန်တီးနိုင်စွမ်း တိုးတက်ထက်မြက်လာစေဖို့ ကြိုး စားလေ့ကျင့်ထားကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
-အိုဒီယာ (Connect University)
ကြောငျးသား၊ ကြောငျးသူ မြားမသိဘဲ ပွုလုပျမိတတျတဲ့ Plagiarism အကွောငျး
ပွဋ်ဌာနျးစာအုပျပါ စာပိုဒျတှေ၊ ဆရာ/ဆရာမတှေ ရေးသားပွငျဆငျပေးထားတဲ့ မေးခှနျး၊ အဖွတှေနေဲ့ စာစီစာကုံးတှကေို နားလညျသညျဖွဈစေ၊ နားမလညျသညျဖွဈစေ တဈလုံးမကနျြ အလှတျကကျြမှတျဖွဆေိုတဲ့ ပညာရေးစနဈနဲ့ အသားကလြာခဲ့သူ မွနျမာလူငယျတှေ အနနေဲ့ Plagiarism (သူမြားရဲ့ အကွံဉာဏျ သို့မဟုတျ အရေးအသားမြားကို ကူးယူပွီး မိမိရဲ့ အကွံဉာဏျ အရေးအသားကဲ့သို့ ပွုလုပျခွငျး) အကွောငျးကို သိရှိထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အမရေိကနျ အပါအဝငျ နိုငျငံတကာ ပညာရေးနယျပယျမှာ Plagiarism ကိုကြောငျးရဲ့ မူဝါဒ စညျးမဉျြး စညျးကမျး ပျေါလစီ (Policy) ထဲ ထညျ့သှငျးရေးသားထားတဲ့အထိ အလေးအနကျထားကွလို့ပါပဲ။
ကြောငျးသူ၊ ကြောငျးသားတှအေတှကျ Plagiarism ကို အဓိပ်ပာယျ ဖှငျ့ကွညျ့မယျဆိုရငျ ပွဋ်ဌာနျးစာအုပျတှေ၊ အခွားစာအုပျစာစောငျတှနေဲ့ အငျတာနကျစာမကျြနှာတှထေဲက စာသားတှေ၊ ရုပျပုံတှေ၊ အတှေးအချေါတှနေဲ့ စိတျကူး အကွံဉာဏျတှကေို တိုကျရိုကျကူးယူပွီး ကိုယျတိုငျ ရေးသားဖနျတီးထားပုံမြိုးနဲ့ ဟနျဆောငျလိမျလညျတငျပွခွငျး ဖွဈပါတယျ။ Merriam-Webster အဘိဓာနျမှာတော့ Plagiarism ကို “Using the words or ideas of another person as if they were your own words or ideas. Stealing and
passing off the ideas or words of another as one’s own without crediting the source.” လို့ ဆိုထားပါတယျ။ အခွားသူရဲ့ စကားလုံး ဒါမှမဟုတျ စိတျကူး အကွံဉာဏျတှကေို မိမိကိုယျပိုငျ စကားလုံး ဒါမှမဟုတျ စိတျကူး အကွံဉာဏျတှအေဖွဈ အသုံးပွုတာ၊ ပငျမရငျးမွဈတှကေို ရညျညှနျးကိုးကားဖျောပွခွငျး မရှိဘဲ အခွားသူရဲ့ စိတျကူး အကွံဉာဏျတှေ ဒါမှမဟုတျ စကားလုံးတှကေို ခိုးယူပွီး မိမိကိုယျပိုငျအဖွဈ တငျပွတာမြိုး ဖွဈပါတယျ။
အမရေိကနျအပါအဝငျ ကမ်ဘာ့နိုငျငံ တျောတျောမြားမြားမှာ ကရုပျဝတ်ထုပစ်စညျးတှအေတှကျ မူပိုငျခှငျ့ဆိုတာရှိသလို ဦးနှောကျဉာဏျကို အသုံးပွုပွီး ရေးသားပွုစု ဖနျတီးထားတဲ့ အရာတှအေတှကျလညျး ဉာဏပစ်စညျးမူပိုငျခှငျ့ ဆိုတာတှရှေိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့တဈပါးသူရဲ့ ကွိုးစားအားထုတျမှုနဲ့ ရရှိလာတဲ့ ဘယျအရာကိုမဆို ကိုယျပိုငျဖနျတီးမှုလို ဟနျဆောငျ လိမျညာပွီး လကျလှတျစပယျသုံးစှဲလို့ မရပါဘူး။ အဲဒီလိုလုပျခဲ့ရငျလညျး လိမျလညျမှု (fraud)၊ ခိုးယူမှု (theft) မွောကျပါတယျ။
ပညာရေး နယျပယျမှာလညျး ဒီလိုပါပဲ။ ကိုယျပိုငျအတှေးအချေါနဲ့ ရေးသားဖနျတီး တငျပွကွဖို့ ဆရာ၊ ဆရာမတှကေ တာဝနျပေးခြိနျမှာ ကြောငျးသူ၊ ကြောငျးသားတှကေ ပွဋ်ဌာနျးစာအုပျအပါအဝငျ စာအုပျစာတမျးအမြိုးမြိုးနဲ့ အငျတာနကျ စာမကျြနှာတှပေျေါကနေ ရှာဖှကေူးယူပွီး ဖွတျညှပျကပျပုံစံနဲ့ ကိုယျပိုငျအသှငျ ဖနျတီးရေးသား တငျပွမယျဆိုရငျ Plagiarism မွောကျပါတယျ။ ဒါကို ပညာရေးအသိုငျးအဝိုငျးက ပညာရပျပိုငျးဆိုငျရာ မသမာမှု၊ ပွငျးထနျတဲ့ ကိုယျကငျြ့တရား ခြိုးဖောကျမှုအဖွဈ သတျမှတျပွီး အရေးယူတာမြိုးတှေ ရှိပါတယျ။ ပွနျလညျ ရေးသားတငျပွခိုငျးတာကစလို့ တကယျ့ကို ကွီးလေးတဲ့ (Plagiarism) အတှကျ ကြောငျးကနေ ထုတျပယျလိုကျတဲ့အထိ အရေးယူတတျ ကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပွဋ်ဌာနျးစာအုပျနဲ့ တူအောငျ ရေးသားဖွဆေိုနိုငျလေ၊ အမှတျမြားလဆေိုတဲ့ ပညာရေးစနဈနဲ့ ယဉျပါးခဲ့ရတဲ့ ကြောငျးသူ၊ ကြောငျးသားတှအေနနေဲ့ ပွဋ်ဌာနျးစာအုပျနဲ့ အနီးစပျဆုံးတူ
လေ၊ စာမေးပှဲကနြိုငျခွမြေားလဖွေဈတဲ့ “Plagiarism policy” ကို နားလညျသိရှိထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ဒီလိုဆိုရငျ တဈပါးသူရဲ့ အရေးအသားနဲ့ အတှေးအချေါတှကေို လုံးဝယူရေးလို့ မရဘူးလားလို့ မေးစရာရှိပါတယျ။ သတျမှတျထားတာလေးတှကေို လိုကျနာမယျဆိုရငျ လိုအပျတဲ့နရောတခြို့မှာ တရားဝငျယူ သုံးလို့ ရပါတယျ။ ကိုယျယူသုံးခငျြတဲ့ အခကျြအလကျစာသား အခြို့ကို မကျြဆံအဖှငျ့ အပိတျလို့ချေါကွတဲ့ quotation marks အမှတျအသား (“—“) ထဲမှာ ထညျ့ပေးရပါတယျ။ ပွီးရငျတော့ အဲဒါတှကေို ရယူထားတဲ့ ရငျးမွဈ (source) ကို ထညျ့သှငျးဖျောပွပေးရပါမယျ။ ရငျးမွဈဆိုရာမှာလညျး လူပုဂ်ဂိုလျ၊ စာအုပျ စာတမျး၊ ဆောငျးပါးစတာတှအေပါအဝငျ ကိုယျထုတျယူ အသုံးပွုတဲ့ မူလဇဈမွဈနရောတှေ အကုနျလုံး အကြုံးဝငျပါတယျ။
Plagiarism ကို ရှောငျလှဲနိုငျစမေယျ့ နောကျထပျ နညျးလမျးတဈခုကတော့ မိမိဖတျရှုလလေ့ာထားတဲ့ အကွောငျးအရာကို မိမိနားလညျတဲ့အတိုငျး ကိုယျပိုငျဟနျ၊ ကိုယျပိုငျစာလုံးတှနေဲ့ ပွနျလညျ ရှငျးလငျးရေးသားကာ paraphrase လုပျခွငျးဖွဈပါတယျ။ အဲဒီလိုလုပျဆောငျနိုငျဖို့ အတှကျ အကွောငျးအရာကို သခြောနားလညျဖို့ လိုအပျပွီး တဈခေါကျဖတျရုံနဲ့ မလုံလောကျရငျ ထပျတလဲလဲ ပွနျဖတျပွီး ကိုယျပိုငျဟနျ၊ ကိုယျပိုငျစာလုံး၊ ကိုယျပိုငျစိတျကူးတို့နဲ့ ပွနျလညျ ရေးသားပွငျဆငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ မိမိကွညျ့ခဲ့တဲ့ ရုပျရှငျ
အကွောငျးကို သူငယျခငျြး ဒါမှမဟုတျ မိသားစုဝငျတှကေို ပွနျလညျ သုံးသပျပွောဆိုပွခွငျးမြိုးနဲ့ “paraphrase”လုပျတာကို လကေ့ငျြ့ပြိုးထောငျ ယူနိုငျပါတယျ။
ရိုးရှငျးပမေဲ့ Plagiarism ကို ရှောငျလှဲနိုငျစမေဲ့ နောကျဆုံးတဈခကျြကတော့ အကွောငျးအရာနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ ကိုယျပိုငျ ဥပမာလေး တှပေေးပွီး ပွငျဆငျရေးသားဖို့ ပါပဲ။ အဲဒီလိုလုပျနိုငျမယျဆိုရငျ ဆရာ၊ ဆရာမတှအေနနေဲ့ အကွောငျးအရာအပျေါ ကြောငျး သူ၊ ကြောငျးသားတှရေဲ့ နားလညျနိုငျစှမျးကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး အကဲဖွတျသုံးသပျနိုငျမှာ ဖွဈသလို တဈဖကျမှာလညျး ကာယကံရှငျ ကြောငျးသူ၊ ကြောငျးသားတှရေဲ့ ဆကျစပျတှေးချေါနိုငျစှမျးတှေ တိုးတကျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
အခြုပျအနနေဲ့ အလှတျကကျြမှတျ ဖွဆေိုစနဈနဲ့ ကွီးပွငျးခဲ့ရတဲ့ မွနျမာကြောငျးသူ၊ ကြောငျးသားတှအေနနေဲ့ နိုငျငံတကာ ပညာရေး အသိုငျးအဝိုငျးထဲ ဝငျရောကျကွရာမှာ Plagiarism policy နဲ့ ငွိစှနျးမှုမရှိစဖေို့အတှကျ အပျေါက အခကျြလေးတှကေို သတိပွုလိုကျနာပွီး ကိုယျပိုငျ စဉျးစားတှေးချေါ ဖနျတီးနိုငျစှမျး တိုးတကျထကျမွကျလာစဖေို့ ကွိုး စားလကေ့ငျြ့ထားကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ။
Previous PostFeed the Rats (iOS)
Next PostWork.com.mm Job Search